सलोनको डेब्यु : एक फुच्चेको स्टेज प्रस्तुतिमा जब भुवनको नजर पर्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सलोनको डेब्यु : एक फुच्चेको स्टेज प्रस्तुतिमा जब भुवनको नजर पर्यो
सुशिल नेपाल , २६ अषाढ २०७६
काठमाडौं। स्टार किड्स हुन् अभिनेता सलोन बस्नेत। निर्देशक, निर्माता तथा कलाकार शोभित बस्नेत उनका बाबु। कलाकार, निर्माता तथा निर्देशक जयकिशन बस्नेत उनका काका । सलोन बाल्यकालमा थिए, जतिबेला बुबा र काकाको ब्यस्तता अहिलेभन्दा अझ बेसी थियो।
परिवारको त्यो माहोलले सलोनलाई पनि तानिसकेको थियो। बुवा र काका स्टेज कार्यक्रममा हिँडथे। सलोन पनि के कम! बुवा र काकासँगै स्टेज कार्यक्रममा हिँडन थाले। सँगै प्रस्तुती पनि दिन थाले।
१८ वर्ष अगाडिको कुरा। जतिबेला सलोन ६ वर्षका थिए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर उपस्थित भए, अभिनेता भुवन केसी। भुवनको अगाडि सलोनले नृत्य र अभिनय गरे। त्यो प्रस्तुतीले भुवनलाई प्रभावित पार्यो।
त्यति मात्र कहाँ! चलचित्र निर्माणको तयारीमा रहेका भुवनले फुच्चे सलोनलाई चलचित्रमा अभिनय गराउन चाहे। ‘मेरो प्रस्तुति मन पराएपछि भुवन अंकलले स्टेजमै चढेर चलचित्रमा खेलाउने घोषणा गर्नुभयो’– डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा सलोन सुनाउँछन्।
सलोनले भुवनको ‘नेपाली बाबु’मा अभिनय गरे। चलचित्र प्रदर्शनमा आयो। हलमा दर्शक ओइरिए। हिट मात्र कहाँ, यो चलचित्र सुपरहिट भयो।
यता, सलोनको अभिनयको पनि चौतर्फी प्रशंसा भयो। त्यसयता बाल कलाकारका रुपमा उनलाई लिन चाहने निर्माताको लाइन लाग्यो। एउटा स्टेज कार्यक्रमले जुराएको संजोगले अन्नतः सलोन बालकलाकारका रुपमा स्थापित बन्न पुगे।
६ वर्षको ग्यापपछि सलोन सुनिल रावलको निर्माण रहेको ‘होस्टेल’ मार्फत् अभिनेताका रुपमा कमब्याक गरे। ‘होस्टेल’लाई युवापुस्ताले औधि रुचाए। जसका लागि अभिनेताका रुपमा पछि सलोन पहिलो चलचित्रबाटै स्थापित बनिदिए।
‘बालकलाकारका रुपमा ३ दर्जन बढी चलचित्रमा अभिनय गरे’–उनि बाल्यकालमा अभिनय गरेका चलचित्र संख्या सुनाउँछन्। आफ्नोपन, आशीर्वाद, आफन्त, हामी तीन भाइलगायत चलचित्र उनी बालकलाकारको रुपमा अभिनित हिट चलचित्र हुन्। उनि बालकलाकारका रुपमा अभिनित पछिल्लो चलचित्र ‘हामी तीन भाइ’ हो।
त्यसयता केही वर्ष उनको अभिनयमा ब्रेक लाग्यो। ‘त्यतिबेला म कक्षा ८ मा पढ्दै थिए। त्यसयता अभिनयलाई एकापट्टि राखेर पढाइमा केन्द्रित भए’– सलोन अभिनयबाट ग्याप हुनुको कारण खुलाउँछन्।
त्यसयता सलोनलाई लिएर चलचित्र बनाउन चाहाने निर्माता बढदै गए। सलोन एकपछि अर्को चलचित्रमा अभिनय गए । होस्टेलपछि ‘गाजलु’, ‘लभसब’, ‘ए मेरो हजुर २’, ‘बाबु कान्छा’, ‘जय भोले’, ‘सुश्री सम्पत्ति’, ‘यात्रा’, ‘ए मेरो हजुर ३’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरे।
सलोन आफू अभिनयकै लागि जन्मिएको बताउँछन्।
‘म बाल कलाकारका रुपमा उदाए । अहिलेसम्म चलचित्र क्षेत्रभन्दा बाहिर कुनै पनि काम गरेको छैन्। जानेको पनि छैन्’– सलोन भन्छन् ‘म अभिनयकै लागि जन्मिएको हुँ। अभिनय गरेरै मर्न चाहन्छु।’